Nevertheless – Gold Channel Movies
Jun. 19, 2021 JTBC
Episode 1 Jun. 19, 2021
Episode2Jun. 26, 2021
Episode3Jul. 03, 2021
Episode4Jul. 10, 2021
Episode5Jul. 17, 2021
Episode6Jul. 24, 2021
Episode 8 Aug. 07, 2021
Episode 10 Aug. 21, 2021
GC ပရိသတ်ကြီး စောင့်မျှော်နေတဲ့ Visual-Couple ရဲ့ ဇာတ်ကားသစ်လေးဖြစ်တဲ့ JTBC Drama “Nevertheless” ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Park Jae-Eon (Song Kang) ဟာ အနုပညာမေဂျာအထူးပြုသင်ယူနေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ အမြဲတမ်းတက်ကြွပြီးပျော်ရွှင်နေပေမဲ့ ချစ်ရမှာကြောက်နေတဲ့ လူငယ်လေး..။
Yoo Na-Bi (Han So-Hee) ကတော့ တက္ကသိုလ်တူတူတက်နေတဲ့ အသဲကွဲထားတဲ့ကောင်မလေး။ သူကတော့ ထပ်မချစ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးပေါ့။ (ဝဋ်တွေများ..နောက်တစ်ကားလည်တယ်နော်😂😂 စနိုက်ကြော်ခံရတာပါ)။မချစ်ရဲကြပေမဲ့ အီစီကလီစီတော့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ visual couple ပါ။ The World of Married Couple Uni-version လို့ပြောနေကြပါတယ်။
ဒီလိုချစ်ရမှာကြောက်နေတဲ့ သူနှစ်ဦးတွေ့ဆုံပြီး ချစ်တတ်အောင် ဘယ်လိုသင်ယူကြမလဲ။ သူတို့နဲ့အတူတူ Relationship တစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတာ GC ပရိသတ်ကြီးလည်း အက်မင်တို့နဲ့ အတူတူ စောင်ကိုက်ရင်း လေ့လာကြတာပေါ့။
rating ကတော့ 19+ သတ်မှတ်ထားလို့ ရိုတဲ့အခန်းတွေအပြင် တစ်ချို့သောအခန်းတွေကိုကြည့်ဖို့ အသက်ပြည့်ဖို့တော့ လိုပါတယ် 🌚🌚။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို Gold Channel နဲ့ တူတူကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။
Original title 알고있지만,
TheronSeptember 5, 2021Reply
Thanks for another informative website. The place else could I get that kind of info written in such
a perfect way? I haveaproject that I’m simply now running on, and I have been on the look out for such information.
Takealook at my web page :: why asmr [bit.ly]
VeronicaSeptember 5, 2021Reply
my web page – scoliosis surgery was
BridgetteSeptember 4, 2021Reply
Here is my site … where asmr (bit.ly)
JurgenSeptember 2, 2021Reply
I am happy that asmr (http://j.mp/38vuS56) you just shared this
RaulAugust 30, 2021Reply
my site … their quest bars [http://tinyurl.com]
ArianneAugust 28, 2021Reply
Feel free to visit my web-site – was web hosting
WaiyanlinJune 24, 2021Reply
Hsu ToeJune 23, 2021Reply
Ro MiJune 22, 2021Reply
MalthiJune 21, 2021Reply
Thanks alot Admin🙏💕